Los Angeles Mapurisa Vhura iyo iPhone 5s | IPhone nhau
Mushure mekukakavadzana kwakagadzirwa neFBI neApple yekambani yeCupertinoino-kuvhura iyo iPhone 5c inoshandiswa nemumwe wemagandanga eSan Bernardino kurwisa, magwaro akati wandei kubva kudare remutemo reLos Angeles achangobva kuburitswa maunogona kuverenga kuti dhipatimendi remapurisa eguta yakakwanisa kuwana nzira yekuvhura iPhone 5s.
Iyo iPhone 5s iri kubvunzwa ndeyaMukadzi weThe Shields mutambi Michael Jace, uyo akapondwa kumaodzanyemba kweguta. Iyo kodhi yekuvhura foni yakawanikwa mwedzi wapfuura, nekuda kwekubatana kwemunhu, ane zita risingazivikanwe, nyanzvi yefoni, chengetedzo uye kuongorora kwehutongi.
Chikonzero chakapihwa nedhipatimendi remapurisa eLos Angeles chekuyedza kuwana mukadzi wemutambi wacho iPhone 5s kwaive kunetsekana kwemapurisa nezve matambudziko muhukama. Matambudziko aya akamutsa kufarira kwemapurisa kuyedza kuwana mameseji aive atumirwa uye kutarisa kana vawana chero ruzivo rwakanangana nemhosva.
Kuedza kuwana iyo iPhone 5s, injiniya weApple akakumbirwa kubatsira mapurisa kuburitsa data, asi haana kukwanisa kuzviita. Muchipiri akaedza, mainjiniya akati wandei akatadza kuwana mudziyo, uyo wakazogumiswa. Hatizive kuti ndeipi vhezheni yeIOS iyo foni yainge yaisa, asi mhando dzakasvika pamusika kubva ku iPhone 5s ivo vakanyanya kunetsa kuvhura kupfuura ekare mamodheru, nekuda kweiyo Apple inodaidza iyo Yakachengeteka Enclave, uko processor imwechete inobata kunyorera kunoshandiswa kubatidza foni uye kuwana iyo system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 5s » Los Angeles Mapurisa Kuvhura iPhone 5s